Xafiiska hanti Dhowrka oo Si Kadis ah u galay xafiisyada maamulka iyo Lacagta ee wasaarada waxbarshada | Biyoguurenews.com
Home Wararka Xafiiska hanti Dhowrka oo Si Kadis ah u galay xafiisyada maamulka iyo...
Xafiiska hanti Dhowrka oo Si Kadis ah u galay xafiisyada maamulka iyo Lacagta ee wasaarada waxbarshada
Xafiiska Hanti-dhawrka guud ee Qaranka Somaliland ayaa Maalintii shalay bilaabay baadhitaan ay ku sammaynayaan Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland. Baadhitaankan oo subaxyadii hore ee shalay ka bilawday xarunta Wasaaradda ayaa Masuuliyiintii hanta-dhawrku ay Albaabada u xidheen qaar ka mid ah Xafiisyada Maamulka iyo kuwa lacagaha iyagoo joojiyey gabi ahaanba shaqooyinkii halkaasi ka socday.
Sida ay noo xaqiijiyeen ilo u dhuun daloola Xafiiska hanta-dhawrka Qaranka, tallaabadan ayaa la xidhiidha shaqooyinkooda caadiga ah, isla markaana ay ku ugu kuur galayaan nay si sax ah u socdaan nidaamyada xisaabaadka ee Wasaaraddaha si aanay uga dhicin wax-is-daba-arin iyo musuq-maasuq.
Baadhitaankan ayaa qayb ka ah hawl-galo kala duwan oo masuuliyiinta hanta-dhawrku ay muddooyinkii ka wadeen Xafiisyada Xukuumada ee kala duwan, kuwaasoo lala xidhiidhinayo inay ka dhacaan musuqmaasuq iyo lunsiga hantida Qaranka Somaliland.
Waxana imika ka hor ay baadhitaano ku sammeeyeen Wasaaradda Warfaafinta iyo wacyi-gelinta Somaliland, Wasaaradda Gaashaandhiga Somaliland iyo Xafiiska Maareeyaha Madbacadda Qaranka. Iyadoo muddadii ay baadhitaano socdeen xabsiga loo taxaabay qaar ka mid ah ku waayeen.
Geesta kale, waxa Maxkamadda Gobolka Hargeysa ka bilaabmay dhagaysiga dacwadaha lagu soo oogay masuuliyiintii hore loogu eedeeyey musuq-maasuqa. Xeer-ilaalinta gobolka Hargeysa ayaa Maxkamadda hor keenay eedahaasi, iyadoo masuuliyiintuna ay iska difaacayeen eedahaasi loo haysto.
Waxaana hadda si rasmiya ay uga bilaabantay dhegasiga dacwadoodu masuuliyiintii madbacada qaranka Somaliland oo hore xafiiska hantidhawrku xabsiga ugu taxaabay.
Iyadoo sida xogahani tibaaxeen ay xigidoonto dhegaysiga dacwadahoodu xubnihii isugu jiray wasiirada iyo agaasimeyaasha ee wasaaradaha warfaafinta iyo gaashaandhiga ee sababaha musuqmaasuq daraadood xilalka looga qaaday xafiiska hantidhawrkuna dacwadooda hore u gudbiyey xeer ilaalinta qaranka.
Shacabka reer Somaliland ayaa yididiilo-farxadeed ku qaabilay tallaabooyinkan ay hanta-dhawrku ku baadhayaan lunsiga Hantida Qaranka ee Somaliland.
Previous articleCiidamada Booliska Somaliland Oo Xabsiga Dhigay Afhayeenkii Wasaarada Arimaha Gudaha + [ Sababta
Next articleWargeyska East African Business Week ee Kasoo Kampala Uganda aya Qoray heshiis Dhexmaray labada dal ee Ireland iyo Somaliland